Hollande: Dagaal diimeed ma dooneyno – Biyacade
January 18, 2015 January 18, 2015 biyacade
status	Hollande: Dagaal diimeed ma dooneyno
Niger waxaa ka socdo dibad baxyo looga soo horjeedo sawir gacmeedka
Madaxweynaha Faransiiska Francois
Hollande, ayaa sheegay in uusan
marnaba aqbalayn in uu dabinka ugu
dhaco “argagixisada” oo uu faraha la
galo dagaal diimeed.
Mr Hollande ayaa hadalkaasi jeediyay xilli dibad-baxyo ka dhanka ah Faransiiska ay ka
socdaan waddamo badan oo uu ka mid ah dalalka Islaamka.
Dibadbaxyada ugu ballaaran ayaa waxa ay ka dhacayaan dalka Niger oo illaa todobo kaniisad lagu gubay.
Mr Hollande ayaa sheegay in Faransiisku uu ahaanaya dal calmaani ah oo u furan
diimaha oo dhan.
Waxa uu ugu baaqay dadka dalkiisa in ay
midoobaan oo ay ku dhegnaadaan
Dadka isu soo baxay waxaa u badan
dhallinyaro Dhanka kale dibad-baxyada ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Niamey ee dalka Niger ayaa waxaa ka dhashay khasaaro nafeed iyo mid maalba.
Dadka dibad-baxyada dhigaya ayaa dab
qabadsiiyay kaniisado isla markaana jeex- jeexay nuqullo ka mid ah Baybalka.
Dadkaasi ayaa arrintaasi uga jawaabaya
daabacaadda sawir gacmeed uu wargeyska Charlie Hebdo uu ka sameeyay Nabi Muxammed NABAD GELYO IYO NAXARIIS KORKIISA ALLAHA YEELee
Baadari lagu magacaabo Zakaria Jadi, oo
kaniisaddiisa la gubay ayaa BBC-da u
sheegay in waxba aan looga tagin meesha.
Dalalka kale ee dibadbaxyada ay ka dheceen
waxaa ka mid ah, Pakistan, Turkiga, Yaman,
Soomaaliya iyo kuwa kaloo badan.
BIYACADE KALA SOCO ARIMAHA BULSHADA.
Previous Al-,shabaab waxay dheheen: Adeer yaal waad fiican tihiin lkn waxaan rabnaa in aad nala shaqaysaan!,
Next Dhageeyso umal oo u qiil raadinaya gaaladii rasuulka caaysay dana aduunyo awgeeda